Qatar Airways gosipụtara Qsuite na A350-900 na Kuwait Aviation Show 2018
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Qatar Airways gosipụtara Qsuite na A350-900 na Kuwait Aviation Show 2018
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Technology • Tourism • Transportation
Ihe ngosi a ga - eme site na 17-20 Jenụwarị 2018 na Kuwait International Airport.
Qatar Airways nwere obi ụtọ ịkpọsa nsonye ya na mmemme nke Kuwait Aviation Show 2018, ebe ọ ga-egosipụta Boeing 777 dabara na mmeri ya, oche ọhụụ azụmaahịa ọhụụ ọhụrụ, Qsuite. Ihe ngosi a, nke ga - eme site na 17-20 Jenụwarị 2018 na Kuwait International Airport, ga - egosiputa Qatar Airways nke ozo di elu Airbus A350-900.
Ihe omume ahụ, nke mbụ nke ụdị ya na Kuwait, ga-adọta ọtụtụ puku ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ na mgbasa ozi ụwa. Ntinye aka nke Qatar Airways bidoro 2018 n’egwuregwu, mgbe o kwusịrị afọ nke afọ iri na otu nke ụzọ ọhụụ 11 na ihe karịrị mmeri 50, yana ndị ọbịa ọhụụ ọhụrụ na-atọ ụtọ maka afọ na-abịanụ, gụnyere Pattaya, Thailand; Penang, Malaysia na Canberra, Australia, ịkpọ aha ole na ole.
Qatar Airways Group Chief Executive, Mazị Akbar Al Baker kwuru, sị: “Qatar Airways nwere obi ụtọ isonye na mbụ Kuwait Aviation Show, nke ga-adọta ụfọdụ ndị isi na-emepụta ụgbọelu si gburugburu ụwa. Ekwenyesiri m ike na Qsuite, ngwaahịa ọhụrụ anyị na Ahịa Azụmaahịa, na ọgbara ọhụrụ Airbus A350-900 ga-abụ isi ihe na-adọrọ mmasị kwa izu maka ụlọ ọrụ, azụmaahịa, ndị mgbasa ozi na ndị na-anụ ụgbọ elu, na-egosi ọzọ Qatar Airways 'na-agbasi mbọ ike inweta ihe ọhụrụ na ntinye aka iji hụ na ndị ọrụ anyị nwere ahụmịhe kachasị mma.
"Dịka otu n'ime ụgbọ elu ụwa na-eto ngwa ngwa n'ụwa niile, na-arụ ọrụ ụgbọ elu 63 kwa izu gaa ọdụ ụgbọ elu mba Kuwait ma jikọta ya na ebe karịrị 150, Qatar Airways nọ n'ọnọdụ nke ọma iji nye ndị niile na-aga ikuku ngosi ọrụ mmeri ya."
Qsuite na enye ulo ahia mbu nke okpukpu abuo n’ime ulo oru ndi mmadu, tinyere uzo nzuzo nke n’enye ndi mmadu ohere ime ulo nke ha. Amalitere ya na ITB Berlin na Machị 2017 maka otuto zuru ụwa ọnụ, Qsuite agbanweela njem njem kachasị elu site na iweta ahụmịhe klaasị mbụ na ụlọ klaasị azụmaahịa. Ihe ngosi nke ikike dị n’ime Qsuite na-enye ahụmịhe njem njem kachasị nke ndị njem Qatar Airways, na-enyere ha aka ịmepụta gburugburu ebe obibi maka mkpa nke ha, na-eweta ọkwa nzuzo, ịke na okomoko nke njem njem klaasị.
Ugboro ugbo elu nke etinyere na Qsuite malitere na Doha-London nke ugbo elu n'oge ọkọchị gara aga, n'oge na-adịghị anya Paris na New York, na-arụ ọrụ na Washington, DC malitere na mbido ọnwa a.
Busgbọ elu Airbus A350-900 nke oge a, dịkwa na ngosipụta a, gosipụtara ngụkọta nke oche 283, yana oche 36 Business Class na 247 na Class Economy. Ekele maka imepụta ụlọ ndị ọzọ, a na-enye ndị njem nọ n'ụgbọ ahụ nkasi obi na-enweghị atụ na ụlọ abụọ ahụ, yana Azụmaahịa Klaasị zuru ezu akwa akwa na oche sara mbara na klas akụ na ụba.